Ndị uweojii na-ahụ maka njem nlegharị anya na Myanmar na-ebo ebubo ebubo na-enyo enyo na ụjọ nke Sri Lanka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị uweojii na-ahụ maka njem nlegharị anya na Myanmar na-ebo ebubo ebubo na-enyo enyo na ụjọ nke Sri Lanka
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nwere ike 24, 2019
Ndị uwe ojii na-ahụ maka njem nlegharị anya na Myanmar jidere nwoke Sri Lanka n'ehihie Thursday. E boro onye njem ahụ si Sri Lanka ebubo ka ya na ndị ahụ metụtara na bọmbụ Ista na Sri Lanka nke gburu ọ dịkarịa ala mmadụ 250 /
Ndị uwe ojii nwudere Abdul Salam Irshad Mohmood, dị afọ iri atọ na itoolu mgbe ọ pụtara na ọfịs ndị na-ahụ maka ọpụpụ na obodo Yangon iji megharịa akwụkwọ ikike onye njem ya. E jidere ya mgbe ndị uweojii na-ahụ maka ndị njem nlegharị anya na Myanmar rịọrọ na Wednesde na Ngalaba Hotellọ Ọchịchị na Njem Nleta nke mba ahụ iji kọọ ma nwoke ahụ edebanyere aha na họtel ma ọ bụ n'ụlọ ezumike na mba ahụ. Na Myanmar, ụlọ ọrụ na ụlọ ezumike na-arụ ọrụ na ikikere nke ngalaba ahụ kwadoro.
Dịka akwụkwọ ozi ngalaba ahụ zipụrụ na họtel na ụlọ ndị ọbịa, onye a na-enyo enyo, bụ nwa amaala Sri Lanka, rutere Yangon na visa ndị njem na Jenụwarị 2018. Akwụkwọ ozi ahụ nyekwara nọmba paspọtụ ya yana ụbọchị ọmụmụ ya.
Abdul Salam Irshad Mohmood agafewo oge (visa njem nleta) ya otu afọ na ọnwa abụọ. O doro anya ma ndị ọchịchị Sri Lanka nyere ndị gọọmentị Myanmar ozi na onye ahụ na-enyo enyo na Myanmar.
N'ihi ọgbụgba ogbunigwe ahụ a na-eme na Easter Sunday, ndị isi obodo Sri Lanka ekwuola na enwetara ndị niile na-enyo enyo na ndị metụtara njikọ ahụ na mwakpo ahụ ma ọ bụ nwụọ. Ha kwuru na ogbako ogbunigwe ahụ kwenyere na ọ bụ ndị otu okpukperechi Alakụba abụọ amachaghị, bụ National Tawheed Jamaath (NTJ) na Jamathei Millathu Ibrahim (JMI). Islamic State ekwuola na ọ bụ mwakpo ahụ.
Honolulu ruo Sydney: Ụzọ ọhụrụ iji efe ụgbọ elu Hawaii
Delta na-agbakwụnye ihe karịrị 100 ụgbọ elu ọhụrụ si New York
Minista: A ga-agba onye German ọ bụla ọgwụ mgbochi, gwọọ ma ọ bụ ...
Royal Caribbean 'gbara ụgbọ mmiri na-enweghị ebe ọ bụla'…
Achọrọ ọgwụ mgbochi ọhụrụ nke Canada
Ụgbọ elu Toronto na Mont-Tremblant na Porter Airlines...
Enyere paspọtụ na-anọpụ iche na nwoke na nwanyị na US
China ga-eme ka mbupụ data si mba bụrụ ihe…
Iji Reykjavik ọhụrụ weghara mmụọ nke Iceland…
4 AS kwalitere iji wughachi nkwụsi ike nke Indonesia…
Akwụkwọ akụkọ Wellbeing nwere Ken Kladouris
Bahamas, obi nke njem na -eme ememme ụwa ...
China na-eduga ụzọ na Global Green Economy
Rotterdam nke Holland America bụ nde $ 4.1…
Ozi Ndị njem Iberia Ọganihu Site na Mmekọrịta Ọhụrụ November 27, 2021
Ndị na-ekesa ụlọ ọrụ njem nwere ike jikọọ site na taa ruo Iberia site na Kyte API wee nweta ụgwọ ụgbọ elu ya na ọrụ enyemaka.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Africa na-aga n'ihu: Ugbu a na Rwanda November 27, 2021
Onye isi oche nke African Tourism Board (ATB), Mazị Cuthbert Ncube, kwuru okwu nri abalị nke ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya, ndị nnọchianya, na ndị isi oche nke bọọdụ njem dị iche iche gara ya tinyere ihe karịrị ndị ọrụ njem nlegharị anya 3,000 bụ ndị sonyere n'ime izu njem njem Rwanda.
Ọhụrụ Virus nro? WTN na-akpọ oku maka ikike ịgba ọgwụ mgbochi zuru ụwa ọnụ yana nha anya na nkesa November 27, 2021
South Africa nọ n'ọnọdụ ụjọ na iwe ka achọpụtara ụdị Omicron nke coronavirus. N'abalị, ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na-atụ anya ọkụ na-egbuke egbuke na njedebe nke ọwara ahụ, laghachiri n'oge ọchịchịrị na-emechi ókèala, kagbuo ụgbọ elu, yana nje nje amaghị ama na-eyi ahụike ọha na eze egwu na ibi ndụ.
Jamaica na-eche ndị ọbịa njem ụgbọ mmiri nde 3 ugbu a site na 2025 November 27, 2021
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ekpughere na n'ịkwalite mpaghara njem nlegharị anya, Jamaica ga-ezubere ndị ọbịa ụgbọ mmiri nde atọ n'afọ 2025.
Dr. Taleb Rifai oku ngwa ngwa gaa na mba ndị otu UNWTO na-azaghachi Council Executive na akwụkwọ ozi mepere emepe ọhụrụ. November 26, 2021
Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation (UNWTO), na-aza taa na Onye isi oche nke UNWTO Executive Council banyere votu nzuzo na-abịanụ iji kwado ma ọ bụ ghara ịkwado odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO ugbu a.
IATA: nkwado nke EU COVID nke ọnwa 12 ga-echebe mgbake njem nlegharị anya November 26, 2021
Ịkpa oke n'etiti ọgwụ mgbochi ndị WHO kwadoro bụ imefusị ihe onwunwe na ihe mgbochi na-enweghị isi nye nnwere onwe ndị mmadụ ime njem.
Oge ski ọhụrụ nke Europe na-adabere na nguzozi November 26, 2021
A ga-emetụta ọnụ ọgụgụ ndị a na-achọkarị ka ọrịa na-efe efe na-ebulikwa isi ya gafee nnukwu ahịa ski na ebe ebe a na-aga.